कस्मिक मित्र - जीवनशैली - नेपाल
बालुवाटारको ओशोधारा ध्यानकेन्द्रमा यसका संस्थापक आचार्य मैत्रेय सहरका मध्यम वर्ग र मध्यम उमेर समूहलाई नियमित रूपमा आचार्य रजनीश अर्थात् ओशोका प्रेम, आनन्द र उत्सवरूपी प्रसाद बाँड्छन् ।
पैसा र प्रसिद्धिसमेत जीवनको एउटा चरणमा आएर निरर्थक भयो, भीम तिमिल्सिना, ५९, लाई । उनी अच्छाखासा जागिर, घर, कार र परिवारमा सन्तुष्ट भएनन् । त्यसैले त मनको अशान्तिलाई ध्यानतर्फ मोडे, त्यसमार्फत पाएको ज्ञान अरूलाई बाँड्न तम्सिए र आफ्नो परिचयसमेत बदलेर आचार्य मैत्रेयका रूपमा चिनिए ।
बुद्धको ध्यान, कृष्णको बाँसुरी, मीराको घुंघुरु, कबीरको मस्ती सबै अनुभव हुन्छ काठमाडौँ, बालुवाटारको ओशोधारा ध्यानकेन्द्रमा । यसका संस्थापक आचार्य मैत्रेय सहरका मध्यम वर्ग र मध्यम उमेर समूहलाई नियमित रूपमा आचार्य रजनीश अर्थात् ओशोका प्रेम, आनन्द र उत्सवरूपी प्रसाद बाँड्छन् ।
ओशोलाई पिएर र जिएर हेर्नेको कस्मिक संसार छ ओशोधारामा । ध्यानको प्रयोगशाला छिरेका कैयौँ स्वस्थ र मस्त नवसन्न्यासीमा बदलिएका छन् । सयौँ पारपाचुके बदर भएका छन् । कैयौँले कुलत छुटाएका छन् । मानसिक अशान्ति ‘ब्रेक डाउन’ होइन, ‘ब्रेक थु्र’ भएको छ । जीवनमा सुन्दर बिहानी आएको छ ।
ओशोका नवसन्न्यासी भनेका भिक्षु वा खरानी घसेका व्यक्ति होइनन् । कपडा रंगाउनेभन्दा पनि मन रंगाउने सल्लाह दिने अद्भुत दार्शनिक ओशो आफ्ना चेलाचेलीलाई सन्न्यासका नाममा भिखारी या भगौडा होइन, स्वामी या सम्राट् मान्छन् । “ओशो कुनै धर्म होइन, न पूजा हो, न कर्मकाण्ड,” आचार्य मैत्रेय भन्छन्, “हामीले मन्दिर बनाएका छैनौँ बरू घरलाई नै मन्दिर बनाइदिएका छौँ ।”
गृहस्थीवाला नवसन्न्यासी जीवन–जागृति आन्दोलनमा छन् । पत्नी र बालबच्चाको साथमा ध्यान, योग र विपश्यनाको लाभ लिइरहेका छन् । “म सबैलाई प्रशस्त पढ्ने, आफूलाई पुग्दो पैसा कमाउने सल्लाह दिन्छु,” मैत्रेय फर्माउँछन्, “हरेक मानिसले आफू र आफ्नो परिवारका लागि कमाउनैपर्छ ।”
ढुंखर्क, काभ्रेको सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका हुन् मैत्रेय । परिवारको पहिलो सन्तान भएकाले लालनपालन विशेष हुने भइहाल्यो । एकाध वर्षमै भाइ जन्मेकाले मामाघर पनौतीमाथिको गाउँ भूमिडाँडा, कलाँती लगियो उनलाई । ठूली छोरीको पहिलो नाति भएकाले त्यहाँ पनि स्वर्गीय लाडप्यार पाए ।
महाभारतको लेक नाघेर पुग्नुपथ्र्यो कलाँती । उनी किताब देखेपछि दंग परेर पढ्थे । झ्याउँकिरीको गीत सुनेर र खेतको आलीआली कुदेर बित्यो उनको बालापन । खोपासी हुँदै इन्द्रेश्वर मावि पनौतीबाट ०३१ मा एसएलसी गरे । त्रिचन्द्र कलेज पढ्दा ‘साइड जब’ पनि गरे ।
कलेज जीवनमा जुझारु कम्युनिस्ट थिए मैत्रेय । पार्टी सदस्यता लिएको या नलिएको उनलाई यकिन भने छैन । भूमिगत किसिमको हुन्थ्यो राजनीति । पदाधिकारीको ‘लिस्ट’ कतैबाट आउँदा अनौठो पनि लाग्थ्यो । “अहिले आएर ०३६ को हूलमूलमा होमिनु सामान्यजस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्, “युवावस्थामा त सबै साम्यवादी, सबै कम्युनिस्ट ।”
कीर्तिपुर पढ्दा उनी अलि एकान्तबास रुचाउने भइसकेछन् । फुर्सद भयो कि केन्द्रीय पुस्तकालय छिरिहाल्ने, नभए त्यहीँनेरको डाक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डेनमा घन्टौँ बिताउने । अर्थशास्त्र विभागभन्दा माथि युक्लिप्टसको बगैँचा र हिमाल हेरेर कहिल्यै नअघाउने ।
खास गरी एड्भरटाइजिङ, सर्कुलेसनलगायत मिडिया व्यवस्थापनका विधामा काम गरे उनले । त्यसबीचमा अमेरिकाको बोस्टनमा जनरल म्यानेजमेन्ट अध्ययनको अवसर मिल्यो । अर्थशास्त्री भए पनि कुशल सञ्चार व्यवस्थापकको चिनारी बन्यो ।
मैत्रेय आबद्ध पहिलो म्यागेजिन भने हङकङको एसिया ट्राभल ट्रेड हो । तर, उनी आवासीय रूपमा भने त्यहाँ बसेनन् । त्यसपछि संसारप्रसिद्ध पत्रिका न्युजविक, एसिया विक, इकोनोमिक रिभ्यूलगायत थुप्रै ट्राभल र बिजनेस–कमर्स जर्नलको अनुभव उनीसँग छ । केही वर्ष विमान बंगलादेशको इनफ्लाइट म्यागेजिनका सम्पादकसमेत भए । त्यसपछि मिडिया–सपोर्टिङ संस्था मिडिया साउथ एसिया खोले ।
मैत्रेय यायावरजस्ता थिए त्यतिबेला । कहिले काठमाडौँमा हुन्थे, कहिले सिंगापुर, कहिले लन्डन पुग्थे त कहिले हङकङ । प्रिन्ट मिडियाको ‘गोल्डेन एज’ थियो त्यो । पत्रिकाभित्र पनि पत्रिका निस्कन्थे । कहिले ‘स्पेसल सप्लिमेन्ट’, कहिले ‘स्पोन्सर्ड सप्लिमेन्ट’ । त्यस क्रममा उनले थुप्रै ‘स्टेट भिजिट’ भ्याए । विभिन्न मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेनापति अनि धनाढ्यसँग उठबस भयो । तर, तिनीहरूको जीवनशैली देखेर उनलाई एकाएक झड्का लाग्यो । सदैव तँ तँ र म मको भागदौड र लुछाचुँडी ।
जीवनयापनको मेसोमा बाँसबारीमा चारकोठे घर, सानो गाडी र सुखी परिवार भइसकेको थियो । तर, एक अर्ब कमाउने र एक लाख कमाउनेको बीचमा खासै अन्तर देखेनन् उनले । र, बोध भयो– सबैले खाने त्यही एक माना हो, बस्ने त्यही एउटा कोठामा हो ।
त्यतिबेला मैत्रेय नयाँ घर बनाउन चाहन्थे लाजिम्पाटमा । नक्सा बनाउने क्रममा भेट भयो, इन्जिनियर स्वामी आनन्द अरुणसँग । त्यही घर बनाउने बहानामा मैत्रेय र अरुणबीच जमलस्थित मिडिया साउथ एसियाको अफिसमा बीसौँचोटि सत्संग भयो । त्यो घर त बनेन तर घनिष्टता कस्तो बढ्यो भने अरुणले मैत्रेयलाई ओशोको प्रेममा पारिदिए ।
त्यसै क्रममा एउटा पत्रिकामा भारत, उत्तर प्रदेशको श्राबस्तीमा हुने तीनदिने ध्यान शिविरको विज्ञापन देखे उनले । त्यो शिविरमा गए पनि । बुद्धले चतुर्मास बिताएको त्यो ठाउँमा ओशो साहित्य, भिडियो र ध्यान विधिले उनलाई तानिहाल्यो । अरुणले सल्लाह दिए, ‘तीनदिने शिविरले पुग्दैन । ओशो तपोवनमा आउनूस् ।’
अन्तत: तपोवनको सातदिने शिविरमा नाम लेखाए । निष्ठापूर्वक सिके पनि । “म बडो अहंकारी, बौद्धिकवादी व्यक्ति थिएँ । मन्दिरसमेत जान्नथेँ,” उनी २२ वर्षअघि फर्कन्छन्, “जब मैले ओशोको ध्यान पाएँ, उहाँका विचार सुनेँ, मेरो अहंकार गलेर पानी भयो ।”
त्यसो त विश्वविद्यालय पढ्दाताका बजारिया लहैलहैमा लागेर ओशोलाई बेस्सरी गाली गरेका रहेछन् मैत्रेयले । खास गरी ‘सम्भोग से समाधि की ओर’ वाला विवादास्पद प्रवचन आएपछि मान्छे बिगार्ने मान्छे या सेक्सगुरुका रूपमा चित्रित गरिएको थियो उनलाई । त्यसको प्रभावस्वरूप उनमा पनि एकखाले वितृष्णा छाएको थियो ।
सन् १९८६ जनवरीमा नेपाल आएका थिए ओशो । सोल्टी होटलमा अगाडिको सिटमा बसेर ओशोको प्रवचन सुनेका थिए उनले । उनलाई कताकता ओशोले आफूलाई नै ताकेर हेरिरहेको भान हुन्थ्यो । ती सद्बुद्ध पुरुषका प्रवचनले उनलाई अलिकति नरम बनाइदियो ।
त्यसपछि उनले ‘अच्छा बच्चा’ले जस्तो ओशो साहित्य पढे, सुने । उनी नयाँ साधकका रूपमा ओशो तपोवन भित्रिए । त्यहाँ उनका लागि छुट्टै कोठा थियो । स्वामी अरुण त भइहाले, अरू साथी पनि थिए । त्यसबीचमा तपोवनका ट्रस्टीहरूबीच खटपट भयो । उनलाई लाग्यो– आध्यात्मिक ठाउँमा पनि यस्तो हुन्छ ? अनि, निश्चय गरे– यस्तो ठाउँमा बस्दिनँ ।
उनी एक वर्षका लागि विश्व–भ्रमणमा निस्किए । पुराना सन्न्यासी अरुणले उनलाई ओशोको कला सिकाएका जो थिए । चारधाम, हरिद्वारलगायत सन्तका विभिन्न आश्रम चहारे । लगभग दुईवर्षे यायावरीपछि काठमाडौँ फर्किंदा अनायास भेट भयो, ओशोका चेला सिद्धार्थ, भाइबुहारी शैलेन्द्र र प्रियासँग । सन् १९९८ को कुनै दिन । “यहाँ यति धेरै सन्न्यासी थिए, अरूले नभेट्नु, मैले भेट्नु अनि म अन्तरंग विश्वासपात्र हुनु,” उनी सम्झन्छन्, “सद्गुरु त्रिवीर र मबीच अचम्म किसिमले ट्युनिङ मिल्यो ।”
‘ओशो त्रिवीर’ भनिने उनीहरू ओशो–सन्देश फैलाउन आएका रहेछन् नेपाल । अझ ओशोले जीवनको अन्तिम अवस्था हिमालयको आसपास या नेपालमा बिताउने जनाउँदै भनेका रहेछन्, ‘नेपाल मेरा सन्न्यासीहरूबाट रंगिने छ ।’ तर, उनको ५८ वर्षमै निधन भएपछि त्यो धोको पूरा हुन पाएको थिएन ।
चितवनको सौराहामा तीन बिघामा फैलिएको सुन्दर आश्रम भेटियो, ओशो मैत्रेय ध्यानकेन्द्र । सुखद संयोग के भने, आफ्नै नाम भएको आश्रममा पुगेका थिए मैत्रेय । त्यो ओशोधारा गंगोत्री धामका रूपमा छ । त्रिवीरले आफूपछिको पहिलो आचार्य बनाए मैत्रेयलाई । त्यो पनि बिनातालिम । केही वर्षमै माओवादी द्वन्द्वका कारण त्रिवीर भारत फर्किए । काठमाडौँको ओशोधारा ध्यानकेन्द्र अहिले १८ वर्षे भइसक्यो ।
भनाइ छ, धेरै जोगी, मठ उजाड । ओशोकै नाममा तपोवन र ओशोधारा किन त ? “प्रस्तुति मात्र अलग तर मार्ग एउटै हो । तपोवन स्वामी आनन्द अरुणको अभिव्यक्ति हो भने ओशोधारा अर्को अभिव्यक्ति,” उनी भन्छन्, “एउटै फूल लगाएर बगैँचा सुन्दर हुँदैन । ओशो सुपरमार्केट हो, यहाँ अनेक चीज छन् ।”
तपोवन र ओशोधाराबीच एक खालको द्वन्द्व अद्यापि छ । ओशोधाराले तपोवनलाई मान्यता दिएको छ तर तपोवनले ओशोधारालाई मान्यता दिएको छैन । “आचार्य अरुण मेरा गुरु हुनुहुन्छ । मलाई मैत्रेय नाम पनि उहाँले नै दिनुभएको हो,” उनी भन्छन्, “तालमेल भएको भए म सद्गुरु त्रिवीर र उहाँसँग जोडिन्थेँ । म मात्र सही, अरू गलत भन्ने सोच आउनु आफ्नै कमजोरी हो ।”
विडम्बना के भने, ओशोधारामै पनि खटपटको नयाँ संस्करण देखा पर्‍यो । मैत्रेयका अनुयायी एलपी भानु शर्मा, रमेश नेपाल, रञ्जित कोइराला र स्वामी तथागत (केशव खड्का) छुट्टिएर गए ।
उनीहरूमध्ये केहीले ‘जीवन विज्ञान’ नामक अर्को आध्यात्मिक संस्था खोलेका छन् ।
नेपालमा ओशोका सय जना आचार्य, ५० वटा केन्द्र र हजारौँ साधक छन् । मैत्रेयलाई गुरु–डम चलाउने रुचि भने छैन । बरू सच्चा भक्त या प्रस्तोता बन्ने चाहना छ । मैत्रेय नामजस्तै कल्याणमित्र बनेका छन् । शिष्यहरूसँगै खान्छन्, नाच्छन् र डिस्कोथेक पनि जान्छन् । “नाम र नाफा कमाउन त दल खोले भयो, दोकान खोले भयो, अध्यात्ममा किन लाग्नुपर्‍यो ?” उनको धारणा छ, “अध्यात्म भनेको अहंकारबाट ओमकारमा पुग्ने ठाउँ हो । असत्यदेखि सत्यमा पुग्ने ठाउँ हो ।”
मैत्रेयका पत्नी, दुई छोरी र एक छोरा छन् । ठूली छोरी शिरा डाक्टर हुन् भने छोरा राहुल बिजनेस कन्सल्ट्यान्ट छन् । कान्छी छोरी देवांशी पढ्दै छिन् । उनका लागि जीवन सिक्ने अवसर हो, अनुभव लिने अवसर हो । उनलाई थाहा छ, शास्त्र र किताबको कुरा काम लाग्दैन । अनुभवबाट सिकेको कुरा मात्र काम लाग्छ ।
संगीतमा बाल्यकालदेखिकै लगाव छ यी आचार्यको । उनी स्वान्त: सुखायका लागि गीत गाउँछन्, हार्मोनियम बजाउँछन् । आफ्नो लेखको संग्रह गर्न पनि उनलाई त्यस्तो जाँगर छैन । उनलाई लाग्छ, ओशो साहित्यको महासागरमा सानो ढुंगा किन हान्ने ? हुन पनि ६ सय ५० भन्दा बढी पुस्तक, सयौँ ध्यान–सुमिरन–समाधिका विधि, हजारौँ अडियो तथा भिडियो प्रवचन छन् ओशो साहित्यमा ।
दुई सयभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएका ती पुस्तकमा भक्ति, योग, तन्त्र, ताओ, झेन, सुफी साधनाका गूढ रहस्य समेटिएका छन् । उनले नयाँ मनुष्य ‘जोर्बा दी बुद्ध’को मात्र परिकल्पना गरेका छैनन्, गणतन्त्रको विकल्प ‘गुणतन्त्र’, डेमोक्रेसीको विकल्प ‘मेरिटोक्रेसी’ पनि दिएका छन् ।
आचार्य मैत्रेयको शब्दमा प्रत्येक २५ सय वर्षको अन्तरालमा युगलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने महापुरुष आएका छन् । शिवको २५ सय वर्षपछि राम आए, रामको २५ सय वर्षपछि कृष्ण, कृष्णको २५ सय वर्षपछि बुद्ध अनि त्यसको २५ सय वर्षपछि ओशो आएका हुन् ।
मुलुकका ६० लाख ओच्छ्यान खाली हुँदा मैत्रेय अत्यन्त द्रवित हुन्छन् । पढेलेखेका युवकयुवतीका सपनामा नेपाल छैन । गाउँका फलफूल टिपेर खाने मान्छे छैनन् । खेतबारी बाँझै छन् । ओशोको प्रसाद बाँड्ने क्रममा ८० देश घुमेका यी ओशोमार्गीका निम्ति श्रेष्ठतम् देश नेपाल नै हो ।
उनले बुझेको ओशो–मिसन कुनै योगी या चमत्कारी बनाउने होइन, बेहोसीबाट जगाएर सच्चा नागरिक बनाउने हो । ध्यानमा ‘मेन डिभाइस’ छ, विपश्यना अर्थात् स्वयंतिर फर्कने कला । तथ्यबाट सत्य, सासबाट सासपार, विचारबाट निर्विचार र भावबाट भावातीत हुने अर्थोडक्स विपश्यना होइन, परमार्जित भर्सन दिएका छन् ओशोले । “उहाँ वैज्ञानिक हो, हामीचाहिँ टेक्निसियन,” उनी भन्छन्, “सुनलाई आगोले नम्बरी सुन बनाइदिन्छ, ध्यानले मानिसलाई एक नम्बरी बनाइदिन्छ ।” स्कुल–कलेज तहमै ध्यान सिकाउनुपर्ने आचार्य मैत्रेयको मत छ । नो मेडिटेसन, नो लाइफ !